arkOS: daruurtaada "khaaska ah" | Laga soo bilaabo Linux
arkOS: daruurtaada "khaaska ah"
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta
La Raspberry Pi Waxay u jeedday kacaan ka socda suuqa tikniyoolajiyadda maaddaama oo ay u oggolaaneyso in lagu helo kombiyuutar yar, cabbirka kaarka deynta, qiime aad u hooseeya (inta u dhexeysa 25 iyo 35 doolar). Adeegsiga la siiyay Raspberry Pi-ka ayaa ah kuwa ugu kala geddisan: xarunta warbaahinta badan, qalabka ciyaarta, kalkaaliyaha khaaska ah ee faylka ama keydinta boostada, VPN server, iwm.
Ark OS Waa qaybinta GNU / Linux oo loogu talagalay in loo isticmaalo, mabda 'ahaan, Raspberry Pi. In kasta oo ay ku saleysan tahay Arch Linux, hadana lama huraan ma ahan in la noqdo isticmaale horumarsan si loo isticmaalo, maaddaama inta badan shaqooyinkeeda lagu maareeyo iyada oo loo marayo Genesis, codsi garaafis ah oo aad u fudud in la isticmaalo oo kuu oggolaanaya in aad maamusho "adeegyada" kala duwan ee laga ArkOS.
1 Dhibaatada arimaha gaarka ah
3 Ark OS
Dhibaatada arimaha gaarka ah
Internetku wuxuu ku dhashay shabakad ahaan, taas oo ah, isku xirnaanta aaladaha aaladda. Waxa aan aragnay sanadihii la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, waa geedi socodka dib u noqoshada. Soo bixitaanka "daruurta" (kaydinta faylalkaaga ee serverka dibada ah, iwm) iyo "softiweer ahaan adeeg ahaan" (barnaamijyada websaydhka sida Google Docs, Gmail, iwm.) macluumaadka iyo keli ahaanta macluumaadkayaga gacmo yar. Kaliya markaa NSA ayaa sameyn karta waxa ay qabato.
Tani waxay ka dhigan tahay in dhibaatada ugu daran aysan ahayn in NSA ama dowladda X ay noo basaasaan. Guud ahaan, dadku way ka careysiiyaan xaaladdan oo kale waxayna ku cambaareeyaan dawladaha "xadgudubyadooda". Runtu waxay tahay in "xadgudubyadan" sidoo kale ay fuliyaan shirkadaha laf ahaantooda, oo aysan ku koobnayn oo keliya dawladaha. Laakiin taasi waa sheeko kale. Dulucdu waxay tahay waxa ugu daran ee xaaladdan ka jira ayaa ah in bartamaha laga dhigo macluumaadka gacmo kooban; gacmaha shirkadaha, oo u badan Mareykan. Kaliya markaa ayeey suurta gal u tahay NSA inay nagu soo basaasaan ... ama uguyaraan taasi waxay kadhigeysaa mid aad ufudud.
Isuduwidda sii kordheysa waxay ka soo horjeedaa aasaaska internetka. Waa sababtaas awgeed inay jiraan dhibaatooyin badan oo ilaaliya asturnaantayada: Internetka looguma talagalin dhibaatadaas maskaxda lagu hayo. Kiis ku dayasho mudan waxa aan leeyahay waa «ha i raadsan»In hay'adda Mozilla Foundation ay isku dayday inay horumariso. Kaliya maahan shirkado kooban oo ku soo biiray, laakiin waxay ahayd siyaasad ka bixitaan (taas oo ah, sida caadiga ah waxay ku raadinayaan, adiguna waxaad dooraneysaa inaad baxdo) oo ha dooranin (sida caadiga ah KELIYA kuma socdaan adiga adigana waxaad doorataa si miyir qab ah loola socdo). Ujeeddadu waxay tahay in siyaasadda ka-doorbid ee ka takhalusidda raadraaca ay tahay wax aan macquul ahayn, maadaama Internetka aan loogu talagalin ilaalinta asturnaanta maskaxda.
Maxaa dhacaya haddii taa beddelkeeda iska caabin weerarada dawladaha iyo shirkadaha si ay ugu xad gudbaan asturnaantayada, ma qaadnaa talaabooyin dhab ahaantii xallinaya dhibaatada? Kawaran haddii halkii aan aad ugu sii xirnaan lahayn Google ama Microsoft, aan ku haysan karno adeegeena guriga? Marka la soo koobo, Raspberry Pi wuxuu leeyahay qiime jaban iyo awood yar. Dhinaca software-ka, waxaan haysannaa GNU / Linux iyo qalab fara badan oo bilaash ah oo loo adeegsan karo in lagu bixiyo adeeg kasta oo aan u baahanahay (boostada, keydinta faylasha, iwm.). Kaliya waa inaad isku duubnaataa waxaas oo dhan oo aad dhistaa interface ka dhigaya hawlgalku mid sahlan oo caqli gal ah si dadku ugu isticmaali karaan nidaamka si ballaaran, taasina maahan wax lagu soo koobi karo dhowr jiin. Tani waa si sax ah waxa Jacob Cook u maleeyay, ilmo 23 jir ah, oo go'aansaday inuu abuuro ArkOS.
Ballanqaadka: dhammaan faylashaada, emaylladaada iyo kuwa kale ee ku kaydsan gurigaaga, adoo gacanta ku haya, oo leh siyaasadaha amniga ee AAD go'aansato, laakiin laga heli karo meel kasta.
Bilowga waxaa ku qeexay Cook inuu yahay "albaabkaaga shabakadda baahsan."
Laga soo bilaabo Genesis, waxaad si fudud u rakibi kartaa waxyaabo iyo codsiyo, waad soo dejin kartaa ama aad kala soo bixi kartaa faylasha, maareyn kartaa daruurahaaga, cusbooneysiin kartaa nidaamkaaga, iyo waxyaabo kale oo badan. Waxa kale oo aad la socon kartaa xaaladda nidaamka oo aad heli kartaa digniino marka dhibaato dhacdo. Genesus xitaa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad keydiso macluumaadkaaga oo aad keydiso haddii aad qalad sameyso. Qaar ka mid ah "adeegyada" laga heli karo ArkOS waxaa ka mid ah: kaydinta faylka iyo iswaafajinta iyada oo loo marayo Owncloud, wada hadalka XMPP, kalandarka, emaylka, iwm.
Genesus wuxuu isku dayaa inuu isku daro midka ugufiican ee lambarada isku midka ah sida WebMin ama barta internetka ee FreeNAS. Waxaa laga heli karaa biraawsar kasta, iyada oo loo marayo kombiyuutar ku xiran shabakadda maxalliga ah halka uu ku yaal adeegeena arkOS.
El Koodhka isha asalka waxaa laga heli karaa Github.
Soo dejiso ArkOS
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » arkOS: daruurtaada "khaaska ah"
«... dhibaatada ugu daran ma ahan in NSA ama dowladda X ay noo basaasaan ...» Aad ayaan kugula raacsanahay, isla dadkaas ka careysan sababta oo ah basaasiin ayaa ah kuwa macluumaadkooda shaqsiyeed si faahfaahsan ugu dhajiya Facebook kadibna cabanaya markay wax dhacaan.
Sida ArkOS, waxay ila tahay aniga bedel weyn, aad uxun looma hirgelin karo halkan sababo la xiriira isku xirnaansho la'aan, haddii kale, hal dhibic oo dheeri ah oo loo roon yahay Rasberry Pi.
Aah! iyo maqaal aad u fiican ...
Dhibaatada 1: nsa, eu, fbi, naato, iwm.
dhibaatada 2: shirkadaha, barnaamijyada iwm
dhibaatada 3: dan la'aan, isticmaaleyaasha miyir la'aanta ah iwm
haha! soo koobid wanaagsan.
Runta ayaa ah in aan waxbadan kafiiriyo boostada, taasi waa, waxaan filaayay sawirada miraha loo yaqaan 'raspberry' oo la socda distoorkaan iyo sida daruur shaqsiyadeed loo abuuray iyo kuwa kale, kaaga darane, si fiican, inbadan ayaan sugayay, mahadsanid.
Ku jawaab trisquelcolombia
Waan ka farxi lahaa isaga laakiin ma haysto pi raspberry ah. 🙁
Ma aanan ka warqabin qaybintaan waxayna bixisaa wax kasta oo aan doonayay inaan ku sameeyo Raspbian-kayga (ownCloud iyo Blog ka sarreeya dhammaan), markaa runtii waxay noqon doontaa isku day. Yaab yaab igu noqotay. Waad ku mahadsantahay wadaagida 😉
Ku jawaab Ritman
Oo la barbardhigo iskaa iska leh? kee wax qabad fiican?
Maahan cod iskaa ah laftiisa. Waa nidaam hawlgal leh oo leh websaydh lagu maareeyo adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan kaydinta kale ee daruuraha. Haddii aad aado boggooda internetka si aad u daalacato su'aalaha la isweydiiyo, adeegyadaas keydinta daruuriga ah waxaa ka mid ah ikhtiyaarka lagu rakibayo oo loo qaabeyn karo owncloud
Ku jawaab woqer
Sidaas oo kale. 🙂
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Tani SO (arkos + genesis) waa riixitaankii ugu dambeeyay ee Raspi loo baahan yahay in loo caleemo saaro. Waxaan si dhow ula socon doonaa isbeddelka mashruucan, iyo markay fulinayaan adeegyada VPN (durba waan eegay golahooda waxayna ku jirtaa qorshayaashooda mustaqbalka dhow) waxaan u iibin doonaa xirmo kuwa ay hayaan.
Taasi waxay kuu noqon kartaa hab fiican oo aad ku heli karto adeegyo runtii raqiis ah oo aad ku bixiso adeeg "saldhig" ku saleysan qiimo jaban.
Ganacsi ahaan, waxay la shaqaysaa waxyaabo yaab leh.
Adaa mudan! Ha ilaawin inaad ugu tabarucdo DesdeLinux markii aad noqoto milyaneer. 🙂
Isku duubni, Pablo.
qoraal aad u xiiso badan waxaan iibsan doonaa Raspberry 🙂
Wanaagsan! Waan ku faraxsanahay inay xiiso leedahay!
Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay muhiimadda ay leedahay in la helo macluumaad baahin ah. Waxaan ka fikirayaa sidii aan u iibsan lahaa kombuyuutar si aan guryo ugu yeesho server; Waxaan u maleynayaa in distoorkan leh raspberry uu ku fiicnaan lahaa taas. Waxaan sidoo kale ka fekerayay inaan iibsado wax ka yara qaalisan laakiin leh awood badan, wax sida QtBox ah (http://store.nitrux.in/) oo aad iskaa u dhigatid iyo wax lagu maareynayo baloogga.
Ku jawaab babel
Waa fikrad fiican!
Gustavo Noseda dijo
Waad salaaman tihiin, marka hore salaan. Laga soo bilaabo mar hore aad u wanaagsan boostada, iyo guud ahaan baloogga.
Way fiicantahay inaad dhisi kartid qaab dhismeed dhan oo server ah, oo aan ku dhowaad maalgashi lahayn.
Waxa weli shaki ku jiraa waa suurtagal in lagu isticmaalo miis duug ah, maaddaama marwalba ay ka hadlaan adeegsiga SD iyo miisaanka loo yaqaan 'raspberry pi', ee ku yaal bogga mashruuca. Waan fahamsanahay inay iyaga u tahay xulashada ugu dhaqaalaha badan iyo inay kordhinayso dhammaan dhinacyada togan ee mashruuca (shuruud tamar yar, meel bannaan, dabacsanaan, iwm). Laakiin fahamkeyga is-hoosaysiinta awgood waa suurtagal in la isticmaalo mashiin kasta oo kale oo la heli karo, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa in qof ii sheego haddii aan khaldanahay iyo in kale. Maadaama fikraddu ay tahay mid aad u duufsan.
Salaan iyo shabakad intan ka badan oo bilaash ah oo ammaan ah qof walba.
Jawaab Gustavo Noseda
Mabda 'ahaan, waxaan u fahmay si lamid ah adiga: distro-ku wuxuu ku saleysnaan lahaa ArchLinux sidaa darteed waxaa loogu isticmaali karaa kombuyuutar kasta. Si kastaba ha noqotee, sidaad u soo jeediso, bogga rasmiga ah ee mashruuca waxay had iyo jeer ka hadlaan ku adeegsiga Raspberry Pi.
Fiiri, waxaan hadda ogaaday in qaybta Soo degsashada (qaybta "Horukacsan") ay sharxayaan sida loogu rakibo arkOS dusha 'distro' ku saleysan ArchLinux:
Liiska 'Privoxy + AdBlock' iyo xayeysiinta macsalaameynta ah.
Sida loo sameeyo CD drive-ka inuu awoodi waayo inuu xiro